Jowhar.com : Somali Leader News - News: War deg-deg ah: Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday kolonyo ciidamo AMISOM ah deegaanka calamada
April 25 2014 08:35:37
War deg-deg ah: Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday kolonyo ciidamo AMISOM ah deegaanka calamada
Wararka ka imanaya deegaanka calamada ee u dhexeeya magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa sheegaya in kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamo AMISOM ah lagu qaaday weerar is miidaamin ah.
Weerarkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo isku dhex qarxiyay kolonyo ay la socdeen ciidamada AMISOM, kuwaasi oo doonayay inay galaan xero ciidan oo ay AMISOM ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho.
Illaa iyo hadda lama oga qasaaraha ka dhashay weerarkan ismiidaaminta ah hase ahaatee ururka Alshabaab oo sheegtay in uu ka dambeeyay weerarkan ayaa waxaa ay ku sheegteen in ay ku dileen illaa toban ruux oo ahaa ciidamo ka tirsan AMISOM.
Illaa iyo hadda lama oga qasaaraha ka dhashay weerarkan oo lagu tilmaamay in uu ahaa weerar ismiidaamin ah. Qaraxa ayaa laga dareemay deegaano ka fog fog halka uu ka dhacay illaa iyo haddana ma jiro cid sheegatay weerarkan ismiidaaminta ah.
mahad on March 17 2014
0 Comments · 4947 Reads
Jowhar.com756,499 unique visits